पारस शाहले चढ्ने बाईकको मूल्य कति..? मूल्य थाहा पाएपछि चकित पर्नुहुनेछ ..? – List Khabar
Home / समाचार / पारस शाहले चढ्ने बाईकको मूल्य कति..? मूल्य थाहा पाएपछि चकित पर्नुहुनेछ ..?
पारस शाहले चढ्ने बाईकको मूल्य कति..? मूल्य थाहा पाएपछि चकित पर्नुहुनेछ ..?
admin August 2, 2021 समाचार Leaveacomment 185 Views
पूर्वयुवराजधिराज पारश शाहलाई हेल्मेट नलगाई नशालु हालतमा असुरक्षित तवरले मोटरसाइकल कुदाएपछि हिजो साँझ प्रहरीले समातेको छ ।
काठमाडौं महाराजगञ्जको चक्रपथ चोकमा हेल्मेटबिना हार्ले ड्याभिड्सनको मोटरसाइकल कुदाएका उनी सद्दे हालतमा समेत देखिएका छैनन् ।प्रहरीका अनुसार उनले ड्रग्स नखाए पनि सद्दे अवस्थामा नरहेको र राम्रोसँग उभिन र बोल्न समेत नसकेको भिडियोमा देखिन्छ ।
प्रहरीको फन्दामा परेपछि प्रहरीले हात समातेर घर जान अनुरोध गर्दा उल्टै जाइलागेर जान्नँ भन्दै नाकतिर औंला तेर्स्याएर अड्डी कसेका थिए ।
आफूले कहिल्यै हेल्मेट नलगाउने जिद्दी गरेका पारस आज पनि लामै कपालमा प्रहरीसँग दोहोरो सवाल जवाफमा उत्रेका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘म कहिल्यै हेल्मेट लगाउँदिन ।’पछि जम्मा भएका केही मोटरसाइकलवालाले पारसलाई ‘सरकार’ भन्दै बाइक चढाएर बिना हेल्मेट निर्मल निवास पठाएको छ ।
उनले चढ्ने बाईकबारे चासो बढेको छ । केही समयअगाडि पूर्वयुवराज पारस शाहको एउटा भिडियो भाइरल बन्यो। त्यो भिडियोमा केही स्थानीयले उनलाई ‘हामी तपाईंको कार्यकर्ता हौं, हामी राजावादी हौ’ भन्दै थिए।
‘यो वादी र त्यो वादी नभन्नुहोस्, हामी सबै नेपाली हौं। वादी भनेको छुट्याउने कुरा हो। हामी सबै नेपाली हौं, पारसले झोक्किँदै भने। उनले त्यति भनेपछि युट्युबर सोनिका रोकाया पारसको मोटरसाइकलमा चढ्छिन् र दुवैजना हुँइकिन्छन्।
यो भिडियो भाइरल बनेसँगै सोनिकासँगै पारसको मोटरसाइकल पनि चर्चामा रह्यो।कसैले यसलाई बुलेट बाइक भने, कसैले हार्ले डेभिड्सन भने।
के हो त यो बाइक ?
उनले चढेको यो मोटरसाइकल हार्ले डेभिड्सनको सफटेल हेरिटेज १९९५ मोडल हो। यो बाइक हाल नेपालस्थित नेपालको शोरुममा उपलब्ध छैन।उक्त मोडलको मोटरसाइकल नेपाल ल्याइएमा ८५ देखि ९० लाखसम्म पर्नसक्ने हार्ले डेभिड्सन मोटरसाइकलको लागि नेपालको आधिकारिक वितरक आईएमई अटोमोटिभ्सका म्यानेजर महेश थापाले जानकारी दिए।यो मोटरसाइकल हामीले नै सर्भिसिङ गरेका हौं। लामो समयदेखि थन्काएको मोटरसाइकल भएपनि यसमा त्यति जटिल समस्या थिएन,’ उनले भने। अनलाइन मार्गबाट
Previous प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा एक सातापछि बिदा लिँदै
Next राज कुन्द्रा घटनामा शिल्पालाई लाग्यो अर्को झट्का ?
पिसाब फेर्न गाएकी २१ वर्षिय आशाले यस्तो गर्लिन् भन्ने कसैले सोचेका पनि थिएनन्
काठमाडौ । २१ बर्षिया आशा राई विवाहित हुन् । रोजगारको सिलसिलामा आशा ओमन पुग्नु भएको …